Shinjuku JR South Exit(10th April)
Events • Apr 10, 2021
In order to raise awareness in Japan regarding current situation of Myanmar, we Myanmar did an activity of sharing flyers, pocket tissues and Bookmarks at crowded place, Shinjuku JR South Exit as fourth week.
Starting from 1:30pm, local police procted us with casual wears. From 1:30pm till 4:30pm, total number of 1600 flyers, 1500 pocket tissues and about 500 bookmarks have been handed to the Japanese citizens directly.
A young Japanese joined with our group, kneeled down in front of public and requested for help for Myanmar.
We will be doing such rallies every Saturday hence do come and join us if interested.
We would like to express our gratitude to those over 90 volunteers who came and helped us.
As Myanmar citizens who are far away from home, we are trying with all our might.
fighting, Myanmar Citizens
We are on the same page with our siblings who are fighting foragood fight in Myanmar.
The brighest sun always come after the darkest night.
The revolution must win 💪🏻
We will surely win 👏 👏
အမိမြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဂျပန်နိုင်ငံက လူတွေ ပိုသတိထားမိအောင် မြို့လယ်ခေါင် လူစည်ကားတဲ့ ဘူတာတွေ မှာ လက်ကမ်းစာစောင် ၊ တစ်ရှူးနဲ့ Bookmark များ ဝေတဲ့ စတုတ္ထမြောက် အပတ်အစီအစဉ်လေးကို တိုကျိုမြို့ ရှင်းဂျုကုဘူတာတောင်ဘက် ထွက်ပေါက်ရှေ့မှာ ရင်ဘတ်ချင်းတူတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတူတူ စုပေါင်းပြီး ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
✍️မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီက စတင်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုမှာ ဒေသခံ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက အရပ်ဝတ်ဖြင့် လာရောက်စောင့်ရှောက်မှုပေးခဲ့ပါတယ်။ မွန်းလွဲ ၁:၃၀ နာရီမှ ညနေ ၄:၃၀နာရီအတွင်း လက်ကမ်းစာစောင်ပေါင်း ၁၆၀၀၊ တစ်ရှူးထုပ် ၁၅၀၀ နဲ့ BookMark ၅၀၀ ခန့်ကို ဂျပန်ပြည်သူတွေ လက်ဝယ်အရောက် ဝေငှပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
✍️ဂျပန်လူငယ်လေးတစ်ယောက်ကလည်း အဖွဲ့နဲ့လာရောက်ပူးပေါင်း၍ ဂျပန်ပြည်သူတွေသိအောင် ဒူးထောက် တောင်းပန်ပြီး ကူညီအားဖြည့်သွားပါတယ်။
🥰 အပတ်စဉ် စနေနေ့တိုင်း လုပ်သွားမှာ ဖြစ်လို့စိတ်ပါဝင်စားသူများ လာရောက် join လို့ရပါတယ်။
🥰လာရောက်ကူညီ အားဖြည့်ပေးတဲ့ Volunteers ညီအကို မောင်နှမ အယောက် ၉၀ ကျော်ကိုလဲ ကျေးဇူးအထူးပင်တင်ရှိပါတယ်။
ပြည်ပရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အနေနဲ့လည်း နှမ်းတစ်စေ့ အဖြစ် ကြိုးစားပေးနေပါတယ်။💪🏻💪🏻
ပြည်တွင်းမှ ညီအစ်ကို မောင်နှမ များလဲ အားတင်း ထားကြပါနော်။
ပြည်တွင်းမှာ တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ ညီအကို မောင်နှမတွေနဲ့ တစ်သားတည်း ရှိနေပါတယ်နော်။
အမှောင်မိုက်ဆုံးအချ်ိန်တွေကျော်ဖြတ်ပြီးရင် ရောင်နီ လာတော့မှာပါ ။☀️
အရေးတော်ပုံ အောင်ရမယ် ။💪🏻
ငါတို့ နိုင်ကို နိုင်မှာ ။ 👏👏
📌Pocket Tissue Design ကတော့ Art For Freedom ဂရုမှ ယူသုံးထားပါတယ် ။
📌Bookmark ဒီဇိုင်းကတော့ မဂီ မှ စေတနာဖြင့် ရေးဆွဲပေးထားပါတယ် ။
📌 Try Together Group Logo & Cover အတွက် Artist ၂ ယောက်မှ မေတ္တာဖြင့် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲပေးထားပါတယ်။
❤️ Design Artists များအားလုံးကိုလဲ ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ပြုပါတယ်
📸 မေတ္တာဖြင့် ဓာတ်ပုံ လာရောက်ရိုက်ကူးပေးပါသော Volunteers များကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Pamphlets , Pocket Tissue & Bookmarks ဝေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုများကို အောက်ပါ SNS များတွင် Update တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် ။
ဂျပန် ၊ အင်္ဂလိပ် ၊ မြန်မာ ဘာသာ (၃) မျိုးဖြင့်
အလျင်းသင့် သလို တင်ပေးသွားပါမယ် ။
Like & Follow လေး လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်
ပြည်တွင်းက မြန်မာတွေနှင့်အတူတူ အဆုံးထိ တိုက်ပါမယ် 💪🏻💪🏻
Try Together At Japan 🇯🇵
Website : https://trytogetheratjapan.org/
Fb Page: https://www.facebook.com/trytogetheratjapan